Fritters ईस्टरमा परम्परागत मिठो। | ThermoRecines
यस हप्ता म तपाईं लाई सबैभन्दा प्रतिनिधि व्यंजनहरु को अर्को ल्याउँछु ईस्टर हप्ता र त्यो हामी वर्षको कुनै पनी समय लिन सक्छौं। यी प्रसिद्ध प्रकाश र धेरै शराबी हावा fritters कि तपाइँ हरेक काट माया हुनेछन्।
पवन fritters रोजा को दिन मा एक धेरै विशिष्ट मिठाई हो, को रूप मा छन् फ्रेन्च टोस्ट, ला भुटेको दूध वा कीटनाशक। यो एक धेरै साधारण नुस्खा हो जसको आधारaहो चौक्स पेस्ट्री जो कि त्रेको र चिनी र दालचिनी को मिश्रण मा लेपित छ। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यी दुई सामग्रीहरू ईस्टर मिठाईहरू बनाउँदा आवश्यक छन्।
त्यहाँ धेरै किस्महरु छन् कि हामी पाउन सक्छौं। जे होस्, ती सबै मा दूध, गहुँको पीठो र अण्डा मुख्य सामग्री को रूप मा बाहिर खडा। आधारभूत सामाग्री कि हामी सबै घर मा छ र कि हामी यी व्यंजनहरु बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्छौं।
एक पटक गरेपछि, तपाइँ कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई प्रस्तुत। हामी तिनीहरूलाई आइसिंग शुगर संग छर्कन, चीनी र दालचीनी मा कोट, पेस्ट्री क्रीम, क्रीम संग भर्न सक्नुहुन्छ ...
के तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी गर्ने सिक्न चाहानुहुन्छ? चलो नुस्खा संग जानुहोस्!
एक मीठो र हल्का बाइट मा ईस्टर को सबै स्वाद कि हामी सजीलै घर मा तैयार गर्न सक्छौं।
खाना पकाउने समय: 1H
G०० ग्राम पूरै दूध
नमस्कारको 1 चुरोट
गहुँको पीठो को १ 150० ग्राम
फ्राइ forको लागि प्रचुर मात्रामा सूर्यफूल तेल
चिनी सजावट गर्न Icing
दुध र चुटकीमा नुनको साथ बटरमा कटरमा मटर राख्नुहोस् र प्रोग्रामिंगद्वारा मिक्स गर्नुहोस् १ minutes मिनेट, तापमान º ० र गति speed.।.
हामी पीठो र खमीर सम्मिलित गर्छौं र प्रोग्रामिंगद्वारा एकीकृत गर्छौं Seconds सेकेन्डको गतिमा। हामी गिलासको पर्दाफास गर्छौं र तापक्रम केही बेरसम्म let मिनेट आराम गर्न दिन्छौं।
त्यो समय पछि, हामी कभर र सक्रिय गति4समय तालिका बिना। हामी अण्डाहरु एक एक गरीरहेका छौं, उनीहरुलाई राम्रो संग एकीकृत गर्न।
एक पटक ४ अण्डा एकीकृत छन्, हामी जन जाँच गर्छौं। यो गर्न को लागी, हामी एक spatula संग एक सानो आटा लिन्छौं र यसलाई खस्न दिनेछौं। यदि यो एक रिबन को रूप मा पतन हुन्छ, यो एकदम सही हुनेछ। यदि छैन भने, हामी अण्डा थप्न जारी राख्छौं जब सम्म हामी यो छैन। मैले २ वटा थपे। तपाइँ यो भिडियो मा धेरै राम्रो देख्नुहुनेछ।
एकचोटि तयार भएपछि, हामी भाँडामा पिठो हटाउँछौं र यसलाई प्लास्टिकको र्‍यापले छालामा छोप्दछौं।
हामी सूरजमुखी तेल को प्रशस्त संग आगो मा एक बर्तन राखौं।
जब यो तातो छ हामी दुई चम्मच को मदद संग fritters गठन गरीरहेका छौं।
हामी उनीहरुलाई गोल्डन ब्राउन नभएसम्म भुन्छौं र हामी उनीहरुलाई एक कटोरा मा अवशोषक कागज संग अतिरिक्त तेल हटाउन को लागी छोड्छौं।
चिसो एकपटक, हामी तिनीहरूलाई स्ट्रेनरले छर्किएको एक सानो टुक्रा चिनीको साथ सजाउँछौं। हामी उनीहरूलाई पेस्ट्री क्रीम, क्रीम पनि भर्दछौं ...
थप जानकारी - टोरोजास भेरोमामा, चिनी र दालचीनी संग फ्राइड दूध / Andalusian pestiños
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: क्षेत्रीय भोजन, सजिलो, सामान्य, १ घण्टा भन्दा कम, विशेष व्यंजनहरु, इस्टर रेसिपीहरू, थर्मोमिक्स रेसिपीहरू, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » क्षेत्रीय भोजन » Fritters
मोन्टसेराट गाल्भान गोन्जालेज भन्यो
बुलुएलोस ईस्टोरमा होइन, लस सान्टोसमा विशिष्ट छन्
मोन्टसेराट गाल्भान गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्